युके - हाईकोर्टले ट्रान्स टिन्सलाई हावामा उडायो
डिसेम्बर 3, 2020 डिसेम्बर 3, 2020 क्रिस्टिना किटोवा बेलायत, बेलायत फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, बेलायत थोक र B2B, युरोप, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख
उच्च अदालत पहिलो उदाहरण भएकोले यो सम्भावित नै न्यायिक लडाई जारी रहनेछ।
ब्रिटेनको कन्जर्वेटिभ क्षणले १ 16 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई हर्मोनहरू दिने विचारलाई प्रतिरोध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
लैंगिक डिसफोरियाको साथ विश्वभर बिरामीहरूको वृद्धि भएको छ।
बुधवार, उच्च न्यायालयले त्यो फैसला सुनायो १ 16 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई हर्मोन ब्लकरहरू तोक्न सकिदैन। ब्लकरहरू बिरामीहरूमा प्रयोग गरिन्छ जो अर्को लि gender्गमा परिवर्तन गर्न चाहान्छन्। हर्मोन ब्लकरहरूले अनावश्यक शारीरिक परिवर्तनहरू ढिलाइ गर्न सहयोग गर्दछ जुन कसैको लि gender्ग पहिचानसँग मेल खाँदैन।
लन्डनको उच्च न्यायालय (औपचारिक रूपमा "इरल्याण्डमा उनको श्रीमान् उच्च न्यायालय"), अपील कोर्ट र क्राउन कोर्टसँगै, इ England्ल्यान्ड र वेल्सका वरिष्ठ अदालतहरू छन्। यसको नाम कानूनी उद्धरण उद्देश्यको लागि EWHC को रूपमा संक्षिप्त गरिएको छ।
उच्च अदालत पहिलो उदाहरण भएकोले यो सम्भावित नै न्यायिक लडाई जारी रहनेछ। युनाइटेड किंगडममा मर्माइड्स भनिने एक ठूलो प्रो-ट्रान्सगर्नेसन संस्था छ, एक चैरिटी र एड्भोकेसी संगठन जसले लि var्ग भेरिएन्ट र ट्रान्सजेंडर युवालाई समर्थन गर्दछ। यस संस्थालाई ब्रिटिश सरकारबाट ठूलो रकम प्राप्त हुन्छ, साथै राष्ट्रिय लोटरीबाट पनि।
"अँगालो। सशक्त पार्नुहोस्। शिक्षित गर्नु "उनीहरुको आदर्श वाक्य हो। ट्रान्स समुदायका प्रतिनिधिहरू बच्चाहरूको स्थलहरूमा जान ट्रान्स आवश्यकतासँग सम्बन्धित शिक्षा प्रदान गर्दछन्। धेरैले तर्क गर्छन् कि संगठनले बच्चाहरूसँग सम्पर्क गर्न अभिभावकको स्वीकृति मागेन।
यसबाहेक, पश्चिमी मानव अधिकार आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय एलजीबीटी आन्दोलन, र यसको अभिन्न हिस्सा, ट्रान्स आन्दोलन, बालबालिकाको "आफ्नो लि gender्ग परिवर्तन गर्ने मौलिक अधिकार छ" भनेर जोड दिन्छ। लै gender्गिक पहिचानसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू यस्तो उद्देश्यको लागि सिर्जना गरिएको थियो। बेलायतमा, प्रीस्कूलमा बच्चाहरूले लि gender्ग पहिचान र विविधता प्रशिक्षण प्राप्त गर्छन्।
बेलायतका दिशानिर्देशहरू अनुसार, २ बर्ष भन्दा साना बच्चाहरूले सामाजिक संक्रमण, कपडा, खेलौना र सर्वनाम परिवर्तन गर्न सक्दछन्। बेलायतका केही चिकित्सकहरूले 2. बर्ष भन्दा साना बच्चाहरूलाई हार्मोन ब्लकरहरू सिफारिस गरिरहेका थिए। तथापि, हर्मोनहरूले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
ट्रान्स व्यक्तिहरूले बाँकी जीवनको लागि हार्मोनहरू लिनुपर्दछ, लि gender्ग पुन: असाइनमेन्ट सर्जरी गरे पनि। बिरामीलाई स transition्क्रमणका लागि सहयोग पुर्‍याउने क्लिनिकहरू पछिको लागि जिम्मेवार हुँदैनन्। थप रूपमा, त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जसले संक्रमणलाई पछुताए।
Mermaids एक ब्रिटिश चैरिटी र अधिवक्ता संगठन हो जसले लि gender्ग भेरिएन्ट र ट्रान्सजेंडर युवालाई समर्थन गर्दछ।
त्यहाँ ट्रान्स समुदायको बीचमा आत्महत्याको उच्च दर पनि छ। धेरै गैर स्वीकार्यता को जिम्मेदार छन्। जे होस्, त्यहाँ केहि अध्ययनहरू छन् जुन दावी यो लि the्ग परिवर्तन पछि पनि दुखी हुनुको कारण हो भनेर दाबी गर्छन्।
ब्रिटेनको कन्जर्वेटिभ क्षणले १ 16 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई हर्मोनहरू दिने विचारलाई प्रतिरोध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। स्वास्थ्य स्वास्थ्यका असरहरू पनि हो, र बच्चाहरूलाई उनीहरूको निर्णयको लागि जिम्मेवार हुन अनुमति दिन पनि। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वास छ कि आगामी १० बर्षमा British% बेलायती जनसंख्या नयाँ लि to्गमा परिवर्तन हुनेछ।
थप रूपमा, ब्रिटेनले कडा धार्मिक पृष्ठभूमि भएका आप्रवासीहरूको ठूलो संख्या लिइसकेको छ, जसमा इस्लाम पनि समावेश छ, जसले युके स्कूल र स्वास्थ्य सेवाहरूको समर्थन गर्दैन साना बच्चाहरूलाई यस विकल्प प्रदान गर्दछ।
लैंगिक डिसफोरियाको साथ विश्वभर बिरामीहरूको वृद्धि भएको छ। यो किन हुन्छ र यसले के कारण गर्दछ भन्ने अझै उत्तर छैन। अध्ययन सबै एक मनोवैज्ञानिक कोण को नेतृत्व, तर यो अस्पष्ट छ।
ट्रान्ज समुदायले विश्वास गर्दछ कि पहिलेको संक्रमण हुन्छ, सजिलो हुन्छ यो संक्रमणको लागि। उही समयमा, त्यहाँ साइड इफेक्टहरू बारे चिन्ता छ र यी हर्मोनहरूले जीवनकाल छोटो बनाउँछन्। अदालतका लडाईहरू जारी रहनेछन्, र यी मुद्दाहरूको युके एक मात्र राष्ट्र होइन।
सांप्रदायिक समाचार उच्च अदालत हार्मोन ब्लकरहरू lgbt ट्रान्स UK
ट्रम्प २०२?? सम्भावित कमब्याकमा राष्ट्रपति संकेत